စီးဆင်းသောမီတာဖြည့်စက်၊ ပုလင်းပိတ်တံဆိပ်၊ ရေနံစက် - BRENU
Semi အလိုအလျောက်ပြားချပ်ချပ် Labelin ...
Semi-automatic Capsule Filling Machine တွင်လွတ်လပ်သောဆေးတောင့်ကိုအစာကျွေးသည်
စက်ကိုယ်ထည်နှင့်အလုပ်လုပ်သောစားပွဲသည်အက်စ်အက်စ်ပစ္စည်းများကို သုံး၍ ဆေးဆိုင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
Semi Auto Capsule ဖြည့်က M ...
COVID အချိန်အတွင်း၊ အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့မည်သည့်နေရာသို့မဆိုအလွယ်တကူသွားရောက်လည်ပတ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်အင်တာနက်သည်သင်အားလုံးကိုကူညီပါမည် ၃၆၀ ဒီဂရီဗီဒီယိုပြသမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ဖြင့်စာချုပ်ချုပ်နိုင်သည်။ စက်ယန္တရားများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်း၍ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးသင်ဗွီဒီယိုရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မည်သို့စုပုံရမည်၊ မည်သို့လည်ပတ်မည်ကိုလွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ဖြည့်သည့်စက်များသည်အစားအစာလုပ်ငန်း၊ အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၊ နေ့စဉ်ဓာတုဗေဒစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ အနာဂတ်ဖြည့်စွက်စက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဓာတ်ငွေ့လောင်စာ၏တိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ထောင်စုစီးပွားရေး - အရည်ဖြည့်စက်
အစားအစာ၊ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများထုပ်ပိုးသည့်စက်များတွင်စက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတိုးတက်မှုတို့ကြောင့်ဖြည့်စွက်သည့်စက်ပစ္စည်းများတိုးတက်မှုသည်အမျိုးမျိုးသောခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုပြသခဲ့သည်။ စက်ပစ္စည်းဖြည့်ရန်သည်
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်အချိန်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်နေ့ကို ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ မှ ၂၁ တွင်စတင်မည်။ တရုတ် BRENU မှ“ GONGXIFA CAI” သည်နှစ်သစ်ကူး OX နှစ်၌ပါသောသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေပြီး OX ကဲ့သို့သောသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုနေ့စဉ်ကံကောင်းပါစေ။ နှစ်သစ်အတွက်, ငါတို့စက်ရုံ g ...
သင့်အတွက်အရေးအပါဆုံး Filling Machine!
1. ဘယ်လိုဖြည့်စက်ကိုရွေးချယ်? ၀ ယ်သူတော်တော်များများသည် ၀ င်ငွေကိုအပြီးသတ်ချင်ကြသည်။ သို့သော်မှန်ကန်သောဖြည့်စက်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုမသိကြပါ၊ ဘယ်ထုတ်ကုန်မျိုးဖြည့်နေသလဲ။ ကြိုဆိုပါ၏, ကျွန်တော်တို့နာမကိုသိပါစေ, ကျွန်တော်တို့ကိုရုပ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုပြ, ဒါမှမဟုတ်ပေးပို့ ...